Guddiga Gurmadka : “Baladweyne Waxaa Ka Jirta Xaalad Halis Ah - Awdinle Online
Guddiga Gurmadka : “Baladweyne Waxaa Ka Jirta Xaalad Halis Ah
October 28, 2019 (AO) – Guddiga gurmadka fatahaadaha ee uu magacaabay Ra’iisul wasaaraha dalka oo toos ugala hadlay bulshada, TV ga Qaranka ayaa sheegay in xaaladda Beledweyne ay tahay mid Qatar badan ay ka jirto isla markaana xaaladda uu uga sii daray roobkii xalay ka da’ay magaaladaas.
Guddoomiyaha guddiga wasiirka gargaarka XFS Xamsa Saciid Xamsa ayaa Ku dhawaaqay in roobkaasi uu sababay in garoonkii diyaaradaha uu xirmay isla markaana xaaladda ay uga sii dartay.
Guddiga waxa ay ku booriyeen Shacabka Soomaaliyeed iney ka wada qeybqaataan sida walaallahooda loo caawin lahaa, si gaar ah ganacsatada ku nool Galmudug, Puntland iyo gobollada ku dhow dhow iney gurmad uu raashiin ugu horeeyo la gaaraan walaalahooda fatahaaduhu saameeyeen.
Guddiga waxa uu sheegay in Gurmadka uu ku bilowday dar dar xoogan islamarkaana ay Dowladda Gurmadkii ugu horeysay shalay Beledweyn gaarsiisay, maantana ay guddiga la kulmeen Hay’adaha gargaarka oo kuwa QM ugu horeeyaan islamarkaana uu gargaar raashiin oo ka imaanaya Gaalkacyo uu kusoo wajahan yahay Beledweyn, sidoo kalena maanta ay bilowdeen gurmad diyaaradaha qumaatiga u kaca .
Guddiga ayaa dalbaday in cidkasta oo dhibaatooyinka dhacay magacooda gargaar Ku aruurinaysa waa in ay guddiga la wadaagaan cidii aan uhugaansamina lala xisaabtami doono.
Ugu dambeyn guddiga waxa ay shaaciyeen iney sameyn doonaan Maxkamad guur guurta taasi oo deg deg u qaadaysa kiisaska cidii lagu helo iney musuq maasuqdo gar gaarka dadka tawaaleeysan loogu talagalay.
Previous articleXaalad deg deg ah oo looga dhawaaqay gobolka California.
Next articleDiyaaraddo Helicopter ayaa ka qeybqaadanaya baadi-goobka dad lagu la’yahay biyaha Webiga Shabeele